[ December 7, 2019 ] Roobab ka da’aya deegaanada xeebaha Puntland	Puntland
[ December 4, 2019 ] Puntland oo deegaanada xeebaha u digtay iyadoo la sadaaliyay in dufaano ku soo socdaan	Puntland
[ December 4, 2019 ] Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda	Puntland
[ December 4, 2019 ] WHO oo sheegtay in isbedelka Cimilada uu khatarta ugu weyn ku yahay caafimaadka dunida qarniga 21-aad	World
[ December 4, 2019 ] NISA oo qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho	Somalia
Maleeshiyada ISIS. [Sawir Hore]
Puntland oo deegaanada xeebaha u digtay iyadoo la sadaaliyay in dufaano ku soo socdaan
Garoowe-(Puntland Mirror) Iyadoo la sadaaliyay in dufaano ay ku soo socdaan deegaan xeebeedyada Soomaaliya ee saran Badweynta Hindiya, Puntland ayaa ka digtay. Qoraal digniin ah oo maanta oo Arbaco ah ka soo baxay wadaaradda arrimaha [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya ee NISA ayaa qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho habeenimadii xalay. Ninka ayaa la qabtay isaga oo aan wax dhibbaato [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Duufaan lagu magacaabo Pawan oo ka timid Badweynta Hindiya ayaa la sadaalinayaa in ay soo gaarto xeebaha waqooyi ee Soomaaliya maalmaha dhow ee soo socda. Duufaanta oo wadata roobab mahiigaan ah ayaa sababi [...]
Haayadda Culimada Soomaaliyeed oo iclaamisay afar maalmood oo soon ah iyo maalin roob doon ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayadda Culimada Soomaaliyeed ayaa iclaamisay afar maalmood oo soon ah iyo maalin roob doon ah. Sida uu sheegay guddoomiyaha Haayadda Culimada Soomaaliyeed Shiikh Bashiir Axmed Salaad, afarta maalmood ayaa ka bilaabmi doonta maalinta [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shir ay hoggaaminayso Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka dhici doona gudaha magaalada Garoowe horaanta bisha soo socota ee September, sida ay ilo-wareedyo xog ogaal ah ay u sheegeen warsidaha [...]